Ujatshuliswa okwenzeka eqenjini lakhe
USTEVE Barker oqeqesha iStellenbosch weneme ngokuthi iqembu lakhe ligcine liyitholile iwini yokuqala kule sizini Isithombe: BACKPAGEPIX
UMAKADEBONA womqeqeshi, uSteve Barker, ujatshuliswa wukubona abagadli beqembu lakhe iStellenbosch FC sebeqala ukuzinza esigabeni esikhulu i-Absa Premiership.
UBarker ukhuphule iStellenbosch eyisusa kwiNational First Division (NFD) lapho bebezidlela khona amahlanga.
Bafike esigabeni esikhulu kwangahamba kahle njengoba kubathathe imidlalo eyisishiyagalombili ukunqoba umdlalo wabo wokuqala. Bahlule iPolokwane City ekuhambeni beyiguqisa ngo 2-0.
Ngaphambi kwalokho leli qembu bese linemidlalo emine eliyidlale ngokulingana lahlulwa kwemibili. Yize izinto bezibukeka zitshekile kodwa uBarker ubezethemba engakholwa ukuthi iqembu lakhe lizobe livika izembe uma sekusongwa isizini. Lokhu ukuveze emuva kokubuya kanzima kwiLamontville Golden Arrows belandela emuva ngo 2-0 bagcina bethole iphuzu.
“Kumnandi kakhulu (ukuwina). Sengathi kukhona umthwalo osukile. Besilokhu sikhombisa izimpawu zokuthi singawina kusukela isizini iqalile kwazise iqembu beliya ngokuba ngcono. Kodwa kudingeke ukuthi sikusebenzele kanzima ukuwina. Akulula ukuba nemidlalo eyisithupha ekuhambeni kweyisishiyagalombili,” kusho uBarker emuva komdlalo weCity.
IStellenbosch ibambe indawo ka-13 kwi-log emuva kwayo kuhleli AmaZulu FC bese kuvala iChippa United.
Uthe kumqoka ukuthi abagadli bakhe babe bukhali phambi kwamapali.
U-Iqraam Raygners noWaseem Isaacs yibona ebebezihola phambili ngokushaya amagoli kwiNFD ngesizini edlule. URaygners uvalele phakathi amagoli awu-19.
Kwi-Absa Premiership u-Isaacs usenamagoli amane, uRaygners abe namabili.
“Bekungelula ngesikhathi kuqala isizini, uthathe isikhathi ukuzinza (uRaygners). Ngiyajabula ukuthi manje useshaye amagoli amabili emidlalweni emibili. Kanjalo noWaseem usenamathathu emidlalweni emine. Kumnandi uma abagadli beshaya amagoli ngoba lokho kwenyusa amathuba okunqoba imidlalo. Nokho luselude ukhalo kusamele sisebenze kanzima,” kusho uBarker.
Uthe uselinde ukuqhathwa kwiTelkom Knockout athi ukukhohlwa kancane yiligi.
“Mhlawumbe sizokwazi ukuthola umdlalo wasekhaya,” kusho yena.
Ukuqhathwa kwamaqembu kwiTelkom Knockout kuzokwenziwa kusasa emini eRandburg.